सभामुख, उप–सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष–उपाध्यक्षमा कस–कसको सम्भावना ?
Sat, Jun 06, 2020 | 00:29:55 NST
Total Hits: 10.5 K
Posted: Friday, Mar 09, 2018 07:46 AM (2years ago )
काठमाडौं, फागुन २५ – संघीय नेपालको पहिलो राष्ट्रपति चयन प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ ।
राष्ट्रपतिमा वाम गठबन्धनबाट विद्यादेवी भण्डारी र कांग्रेसबाट कुमारीलक्ष्मी राई उम्मेदवार हुनुहुन्छ । वाम गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत रहेकाले वर्तमान राष्ट्रपति भण्डारी नै फेरि पनि राष्ट्रपति बन्ने निश्चित जस्तै छ ।
एमाले र माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख बाँडफाँड गरेका छन् । जसअनुसार एमालेले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष पाएको छ भने माओवादीले उपराष्ट्रपति, प्रतिनिधिसभाको सभामुख र राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्ष पाएको छ ।
लामो रस्साकस्सीपछि एमालेले अर्का आकांक्षी झलनाथ खनालको साटो राष्ट्रपतिमा भण्डारीलाई नै दोहोर्याउने निर्णय गरेको हो ।
उपराष्ट्रपतिमा नन्दबहादुर नै
अहिलेका उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन नै उपराष्ट्रपतिमा दोहोरिने सम्भावना धेरै छ । एमालेले राष्ट्रपतिमा भण्डारीलाई दोहोर्‍याएपछि माओवादीले पनि उपराष्ट्रपतिमा पुनलाई दोहोर्‍ याउने लगभग निश्चित रहेको माओवादीका नेताहरुले बताएका छन् । माओवादीमा अमिक शेरचनको नाम पनि चर्चामा रहेपनि उहाँको सम्भावना कम मात्र छ । यद्यपि यी दुवै विकल्पबारे छलफल भइरहेको माओवादी केन्द्रका नेताहरुले बताएका छन् ।
संसदको सभामुखका लागि शुक्रबार उम्मेद्वारी मनोनयन हुँदैछ । सभामुखका लागि फागुन २६ गते संसदमा चुनाव हुनेछ ।
सभामुख आफ्नो भागमा परेपछि माओवादी केन्द्रले कृष्णवहादुर महरालाई अघि सार्ने धेरै सम्भावना रहेको नेताहरुले बताएका छन् । यसबारेमा माओवादीभित्र सबै नेताको मतो मिलिसकेको बताइन्छ । अध्यक्ष प्रचण्डले महरालाई सभामुख बनाएर बर्षमान पुनलाई पार्टी सञ्चालनमा आफ्नो सारथी बनाउने तयारी गर्नुभएको उहाँ निकट नेताहरुले बताएका छन् । सभामुखका लागि देव गुरुङ निवर्तमान सभामुख ओनसरी घती र जयपुरी घर्तीको नाम पनि चर्चामा नभएको भने होइन ।
एमालेसँगको एकताका लागि धेरै काम गर्न बाँकी रहेकाले बर्षमानलाई त्यो जिम्मेवारी दिने प्रचण्डको तयारी छ । संसदको अधिवेशन आह्वान भएको १५ दिनभित्र सभामुखको चुनाव भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
संघीय समाजवादी फोरमले सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेपछि उपसभामुख पाउने भएको छ । तर फोरमले उपसभामुखमा कसलाई पठाउने भन्नेबारे अहिलेसम्म निर्णय गरिसकेको छैन । फोरम नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले अनुकुल हुने व्यक्तिलाई पार्टीले निर्णय गरी उपसभामुखमा उम्मेदवार उठाउने जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘अरु पार्टीमा जस्तो हाम्रोमा विवाद छैन, संसदीय दलको नेता र पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अनुकुल हुने व्यक्तिलाई उपसभामुखमा पठाउनुहुन्छ ।’
राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा गुरुङ कि तिमल्सिना !
राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष एमालेको भागमा परेको छ । राष्ट्रियसभाको अध्यक्षका लागि एमालेबाट परशुराम मेघी गुरुङ, गणेश तिमल्सिना, सुमन प्याकुरेल, बलराम बास्कोटा, खिमलाल भट्टराई र शेरबहादुर कुँवर लगायतको नाम चर्चामा छ ।
यसमा गुरुङ र तिमल्सिनामध्ये एकजना बन्न सक्ने सम्भावना धेरै रहेको एमाले स्रोतले जनाएको छ । पार्टीका पूर्वसचेतक मेत रहेका गुरुङ तीन पटक सांसद बनिसक्नुभएको छ । यस्तै तिमल्सिना अध्यक्ष केपी ओली निकटका नेता मानिनुहुन्छ ।
कांग्रेसले उम्मेद्वार नउठाउने
राष्ट्रपतिमा उम्मेद्वारी दिए पनि कांग्रेसले सभामुख उपसभामुख राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा उम्मेद्वारी नदिने मनस्थिति बनाइसकेको छ । पदीय गरिमा जोगाउने व्यक्तिलाई सत्तारुढ दलले उम्मेद्वार बनाए कांग्रेसले उम्मेद्वार नबनाउने कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताउनुभयो ।